Izindaba - Izindaba ezimnandi! I-3 bond bond yenkampani isetshenziswe ngempumelelo!
Ngo-Ephreli 30, 2018, ngemuva kwezinyanga ezimbalwa zokulungisa amaphutha, inkampani esanda kuthengwa engu-3 yocingo mechine yaqala ukusebenza ngempumelelo, kwathi umongameli wenkampani abanye abaholi babamba iqhaza ekukhiqizeni ucezu lokuqala locingo.
Okokusebenza kungasetshenziselwa ukukhwepha kwekhwalithi ephezulu yensimbi yensimbi eboshiwe eshisayo, ibha yensimbi eboshiwe ebandayo kanye nebha yensimbi ebushelelezi ebandayo, ngokukhipha okukhulu, ukucacisa okuphezulu, ukuguqulwa okulula, isilinganiso sokuhluleka okuphansi, amandla aqinile -ukugcina nekhwalithi ephezulu. Imishini ilawulwa yikhompyutha ehlelwe yi-PLC. Ububanzi nokuhlukaniswa kwensimbi yensimbi kungalungiswa ngokuya ngesidingo. I-mesh enezikhala ezahlukahlukene zegridi ingafakwa nge-othomathikhi. Ngesikrini sokulawula uhlobo lokuthinta, isimo sokusebenza semishini singabhekwa ngesikhathi sangempela ngesikrini ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo iyafaneleka.
Kusukela ekuqaleni kwalo nyaka, ama-oda avela kumakhasimende amakhulu afike ngokulandelana. Ukukhiqizwa kwe-No.3 wire mechine kuzothuthukisa kakhulu amandla wokukhiqiza wenkampani, kuhlinzeke ukusekelwa okuqinile ukuhlangabezana nokufunwa kwamakhasimende futhi kuthuthukise izinga lokufika ngesikhathi sokulethwa kwe-oda, futhi kusize ukuthuthukiswa okusheshayo kwamabhizinisi.
Le nkampani ingeze imigqa emibili yokukhiqiza ezenzakalelayo ngokuphelele eminyakeni emibili edlule, futhi umphumela wensimbi yensimbi eshisiwe ukhuphuke kakhulu. Le nkampani ithole isitifiketi sase-Australia se-ACRS iminyaka emine. Inani le-oda lasekhaya nakwamanye amazwe nalo liyakhuphuka unyaka nonyaka. Ngokuthuthuka esikhathini esizayo, inkampani yethu nayo ihlela ukwengeza imishini eminingi ngokuzayo ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe.